Academic | University of Maubin
To produce quality of professional person on Geology field. The graduated persons can get jobs in many geological field such as........,etc. Staff Program of Studies Curricuilum & Syllabus Provided Degrees Retire Teachers Thesis & Research Professor ဒေါက်တာယဉ်မင်းထွေး (Head) Department of Geology Professors အမည် ရာထူး ပညာအရည်အချင်း လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့စွဲ အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်နေ့စွဲ ဒေါက်တာယဉ်မင်းထွေး ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) PhD ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၀-၁၉၉၇ ဒေါက်တာမိုးမင်းစိုး ပါမောက္ခ [...]
To interest the subject and varieties of plants To conserve the environment of specific region. Staff Program of Studies Curricuilum & Syllabus Provided Degrees Retire Teacher Thesis & Research Professor ဒေါက်တာမာမာအေး (Head) Department of Botany Professors အမည် ရာထူး ပညာအရည်အချင်း လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့စွဲ အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်နေ့စွဲ ဒေါက်တာမာမာအေး ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) PhD ၃၁-၈-၂၀၀၉ ၁-၁၁-၁၉၈၆ ဒေါက်တာလှလှဝင်း ပါမောက္ခ PhD ၂၈-၇-၂၀၁၁ ၁-၁၁-၁၉၈၆ Associate Professors အမည် [...]
To interest the subject and varieties of plants To conserve the environment of specific region. Staff Program of Studies Curricuilum & Syllabus Provided Degrees Retire Teacher Thesis & Research Professor ဒေါက်တာခင်စန်းဝေ၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) Department of Zoology Professors အမည် ရာထူး ပညာအရည်အချင်း လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့စွဲ အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်နေ့စွဲ ဒေါက်တာခင်စန်းဝေ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) PhD ၈-၃-၂၀၀၅ ၂-၅-၁၉၈၅ ဒေါက်တာနုနုအေး ပါမောက္ခ PhD ၂၀-၇-၂၀၀၇ ၁၉-၁-၁၉၈၇ Associate Professors အမည် [...]
To produce highly qualified person in Mathematics. These trained personnel are to serve in educational, administration section and social sectors of the country. Staff Program of Studies Curricuilum & Syllabus Provided Degrees Retire Teachers Thesis & Research Professor ဒေါက်တာသက်ရီ၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) Department of Mathematics Professors အမည် ရာထူး ပညာအရည်အချင်း လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့စွဲ အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်နေ့စွဲ ဒေါက်တာသက်ရီ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) PhD ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၁၉၈၆ Associate [...]
To produce highly qualified persons in Physics These trained personals are to serve in educational, administration section and social sectors of the country. Staff Program of Studies Curriculum & Syllabus Provided Degrees Retire Teachers Thesis & Research Professor Dr. Cho Cho Khaing (Head) Department of Physics Professors အမည် ရာထူး ပညာအရည်အချင်း လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့စွဲ အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်နေ့စွဲ ဒေါက်တာချိုချိုခိုင် [...]